1 Tantara 29 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 29
Zavatra naterin'ny olona an-tsitra-po hanaovana ny tempoly - Vavaka nataon'i Davida - Ny nanandratana an'i Salomona - Ny nahafatesan'i Davida.
1Ary hoy Davida mpanjaka tamin'ny fiangonana rehetra: Salomona zanako, ilay hany nofidin'Andriamanitra, dia mbola tanora sy osa, ary ny asa hatao dia lehibe, fa tsy lapa ho an'olombelona ity, fa ho an'ny Tompo Andriamanitra. 2Nanao izay tratry ny aiko aho namonona izay hanaovana ny tranon'Andriamanitra, dia volamena hanaovana ny fanaka volamena, volafotsy hanaovana ny fanaka volafotsy, varahina hanaovana ny fanaka varahina, vy hanaovana ny fanaka vy, hazo hanaovana ny fanaka hazo, vato berila sy vato fandatsaka an-tranontranony, vato fanao ravaka sy samihafa volo, vato soa isan-karazany, ary vato marbra ankabetsahany. 3Ary koa, noho ny fitiavako ny tranon'Andriamanitra, ho fanampin'izay rehetra nomaniko hanaovana ny fitoerana masina, 4dia talenta volamena telo arivo, ny volamena avy any Ofira; talenta volafotsy voadio fito arivo, hapetraka amin'ny atin'ny rindrin'ny efi-trano; 5ny volamena hanaovana fanaka volamena, ny volafotsy hanaovana fanaka volafotsy, mbamin'izay asa samihafa rehetra hataon'ny tànan'ny mpanao taozavatra. Iza ary no mba mazoto hanome fanatitra an-tsitra-po koa anio, ho an'ny Tompo?
6Dia nanolotra fanatitra an-tsitra-po ny loham-pianakaviana, ny loham-pokon'Israely, ny tompon'arivo, ny tompon-jato ary ny tonian-draharahan'ny mpanjaka. 7Ka izao no nomeny hanaovana ny asa amin'ny tranon'Andriamanitra: talenta volamena dimy arivo, darika iray alina, talenta volafotsy iray alina; talenta varahina valo arivo sy iray alina, talenta vy iray hetsy. 8Izay nanam-bato soa, nanolotra izany teo am-pelatanan'i Jahiela Gersonita, ho rakitry ny tranon'ny Tompo. 9Nahafaly ny vahoaka ny fanatiny an-tsitra-po, satria tamim-po mazava no nanaovany an'izany fanatitra izany ho an'ny Tompo. Davida mpanjaka koa faly dia faly tamin'izany.
10Dia nisaotra an'ny Tompo teo anatrehan'ny fiangonana rehetra Davida, ka hoy Davida: Isaorana mandrakizay mandrakizay anie hianao, ry Iaveh, Andriamanitr'Israely rainay. 11Anao, ry Iaveh, ny fahalehibeazana, ny fahefana, ny fahamendrehana, ny famirapiratana ary ny voninahitra; fa anao izay rehetra any an-danitra sy etý an-tany; anao, ry Iaveh, ny fanjakana, anao ny fisandratana ambony lavitra noho ny zavatra rehetra! 12Hianao no ihavian'ny harena amam-boninahitra, hianao no manjaka amin'izao rehetra izao; eo an-tànanao ny hery amam-pahefana, ary ny tànanao no manome ny halehibeazana amam-pahamafisana ny zavatra rehetra. 13Koa ankehitriny, ry Andriamanitray ô, hianao no derainay, ary ny anaranao be voninahitra no ankalazainay. 14Fa zinona moa aho, ary zinona ny vahoakako no hanam-pahefana sy hery mba hanao an-tsitra-po fanatitra toy izao? Hianao no ihavian'ny zavatra rehetra; ary ny noraisinay avy teo an-tànanao ihany no natolotray anao. 15Ka izahay dia vahiny sy voanjo ihany eo anatrehanao, tahaka ny razanay rehetra; ary ny androany eto an-tany dia tahaka ny aloka ihany, ka tsy misy azo antenaina. 16Ry Iaveh Andriamanitray ô, izao harena rehetra novononinay hanaovan-trano ho anao, ho an'ny anaranao masina izao, dia ny tànanao no ihaviany; anao ny zavatra rehetra. 17Fantatro, ry Andriamanitro ô, fa mandinika ny fo hianao, ary tia ny hitsim-po, ka an-tsitra-po no nanaovako izao fanatitra rehetra izao amin'ny fahitsian'ny foko; ary amin-kafaliana koa ankehitriny no ahitako ny vahoakako etoana, samy manolotra an-tsitra-po ny fanatiny ho anao. 18Ry Iaveh, Andriamanitr'i Abrahama sy Isaaka ary Israely razanay ô, tahirizo mandrakizay izany mba ho fomban'ny hevitra ao am-pon'ny vahoakanao, ary tano hitodika aminao ny fony. 19Salomona zanako, omeo fo mazava hitandrina ny didinao aman-pitsipikao sy lalànao, mba hanarahany azy rehetra, sy hanaovany ny lapa izay efa namononako zavatra.
20Ny fiangonana rehetra koa nilazan'i Davida hoe: Samia hianareo misaotra an'ny Tompo Andriamanitrareo. Ka dia nisaotra an'ny Tompo Andriamanitry ny razany, ny fiangonana rehetra, sady niondrika izy ireo, sy niankohoka teo anatrehan'ny Tompo sy teo anatrehan'ny mpanjaka. 21Ny ampitson'izany andro izany, dia namono zavatra natao sorona ho an'ny Tompo izy ireo, sy nanolotra sorona dorana ho an'ny Tompo: ombalahy arivo, ondralahy arivo, ary zanak'ondry arivo, mbamin'ny fanatitra araraka fanao, ary sorona hafa be dia be, ho an'Israely rehetra. 22Nihinana sy nisotro teo anatrehan'ny Tompo tamin-kafaliana lehibe izy ireo, tamin'izay andro izay. Salomona zanak'i Davida nantsoiny ampahibemaso fanindroany ho mpanjaka sy nohosorany ho mpanapaka teo anatrehan'ny Tompo, ary Sadaoka koa nohosorany ho mpisorona. 23Nipetraka teo amin'ny seza fiandrianan'ny Tompo Salomona, ho mpanjaka dimbin'i Davida rainy, sady nambinina izy ary nankatoavin'Israely rehetra. 24Nanoa an'i Salomona mpanjaka avokoa ny mpifehy sy ny lehilahy mahery rehetra, hatramin'ireo zanak'i Davida mpanjaka rehetra. 25Ny fiandrianan'i Salomona nasandratry ny Tompo ho ambony indrindra teo imason'Israely rehetra, ny fanjakany nomeny voninahitra mihoatra noho ny an'ny mpanjaka talohany teo amin'Israely rehetra.
26Nanjaka tamin'Israely rehetra Davida zanak'Isaia. 27Efapolo taona no andro nanjakany tamin'Israely: fito taona izy nanjaka tao Hebrona; ary telo amby telopolo taona tao Jerosalema. 28Efa tratra antitra tsara sady voky andro sy harena amam-boninahitra izy vao maty, ary Salomona zanany no nanjaka nandimby azy. 29Ny asan'i Davida mpanjaka, na ny voalohany na ny farany, dia indro fa voasoratra ao amin'ny tantaran'i Samoela mpahita sy amin'ny tantaran'i Gada mpahita, 30mbamin'ny zava-drehetra momba ny fanjakany, sy ny asa nataony tamin-kerim-po sy ny fiovaovan-toetra nahazo azy sy nahazo an'Israely sy ny fanjakana rehetra an-tany hafa. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0143 seconds